ပိုမိုပျော်ရွင်သော အချစ်ရေးအတွက် Self-Care လုပ်ဖို့ အကြံပြုချက် (၇)ချက် - Lifestyle Myanmar
ပိုမိုပျော်ရွင်သော အချစ်ရေးအတွက် Self-Care လုပ်ဖို့ အကြံပြုချက် (၇)ချက်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်မှု(Self-Care) အစီအစဉ်ဟာ သင့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းက သင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်ကြောင်း သုတေသနတွေ့ရှိချက်တွေက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ခြင်းက သင့်အချစ်ရေးအတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။ နှစ်ယောက်အတူတူ self-care လုပ်တဲ့အခါ ပိုပြီးတော့တောင် ကောင်းပါတယ်။ သင်က စက်တစ်လုံးမဟုတ်ပါဘူး။ သင်မရပ်တန့်ရင် လောင်သွားပါလိမ့်မယ်၊ ဒီအရာက သင့်အား မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းတွေ ပျော်နေတာကို မြင်တဲ့အခါ သူတို့ကို မကျေနပ်တဲ့ ခံစားမှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ပျော်ရွင်သော ဆက်ဆံရေးအတွက် Self-care အကြံပြုချက် (၇)ချက်
၁။ ရယ်မောခြင်းက အကောင်းဆုံးဆေးဖြစ်ပါတယ်
ကလေးဘဝတုန်းကအချိန်ကို သတိရလား? အချိန်တိုင်း ရယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကလေးတွေက တစ်နေလုံးကစားနိုင်တယ်၊ ရယ်မောနိုင်တယ် ။ နောက်တစ်ခါ အခွင့်အရေးရရင် ကစားကွင်းမှာ ကစားနေတဲ့ ကလေးတွေကို ကြည့်ပါ။ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေနေပြီး ပြေးလွှားနေကြတယ်။
လူကြီးတွေက ဘဝကို အလေးအနက်ထားလွန်းပြီး ရယ်မောဖို့ကို မေ့နေကြပါတယ်။ ရယ်မောခြင်းက သင့်အတွက်ကော်ငးပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ ဗိုက်ကြောတွေနာအောင် ရယ်ခဲ့ရတာ ဘယ်အချိန်တုန်းကလဲ? သင်မမှတ်မိနိုင်ဘူးဆိုရင် ဒါကတော်တော်ကြာနေခဲ့ပါပြီ။
သင်အကြိုက်ဆုံးဟာသကို ကြည့်ပါ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းပါ။
၂။ Self-care မှာ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်
ငါ့မှာ ဘာရောဂါမှမရှိဘူး၊ ဒါက မလိုအပ်ဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် ကြီးမားသော ခြားနားချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ပေးပါ။လေ့လာမှုတွေအရ ဆရာဝန်နဲ့ ကျန်းမာရေးပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းက ပိုမိုကျန်းမာစွာ အသက်ရှည်ရှည်နေထိုင််နိုင်ကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။
၃။ ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ခြင်းက လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
မြို့ပြလူနေမှုစနစ်မှာ အိပ်စက်ခြင်းဆိုတာက ဦးစားပေးစာရင်းရဲ့ ဟိုးအောက်ဆုံးမှာပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အားပြည့်ဖို့ အိပ်စက်ခြင်း လိုအပ်ပါတယ်။ အလုံအလောက် အနားမယူဘူးဆိုရင် သင့်ဦးနှောက်က အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်မှန် အိပ်ရာဝင်ခြင်းနှင့် အချိန်မှန် အိပ်ရာထဖို့ကို ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အဖြစ် စတင်ပါ။
၄။ တစ်ခါတစ်ရံ ဘာမှမလုပ်ဘဲ အပန်းဖြေနိုင်ပါတယ်
ကျွန်မတို့အားလုံးက self-care ရဲ့အရေးပါမှုကို သိကြပေမယ့် ပုံမှန်လုပ်လေ့လုပ်ထ မရှိကြပါဘူး။ လူအများစုက ယောဂသင်တန်း၊ အနှိပ်ခံခြင်းနှင့် ကျန်းမာစွာ စားခြင်းအကြောင်းသာ ပြောကြတယ်။ဒီအရာအားလုံးက ကောင်းတဲ့အရာတွေ ဖြစ်ပေမယ့် အမှန်က သင်ဘာမှမလုပ်ဘဲ နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရက်လောက် အနားယူလိုက်ရင် လူတိုင်းအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
၅။ အသက်ရှုဖို့နှင့် လွှတ်လိုက်ဖို့ကို လေ့လာပါ
တစ်ခါတစ်ရံမှာ သင်ဟာ အရာရာတိုင်းကို လက်ခံဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တွန်းအားပေးခြင်းကို ရပ်တန့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီရေတတ်ချိန်မှာ ရေဆန်ကူးဖို့ ကြိုးစားခြင်းကို ရပ်ပါ။ သင်မရပ်ရင် သင်ပင်ပန်းပါလိမ့်မယ်။ အရာအားလုံးကို သင်မထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူး။ လွှတ်ချလိုက်ဖို့ သင်ယူတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ခံစားမှုပိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ သင့်မိသားစုက သတိပြုမိပြီး တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။
၆။ ခန္ဓာကိုယ်ကို အာဟာရရှိတဲ့ အစားအစာတွေ ကျွေးပါ
လေ့လာမှုတွေအရ အစားအစာက သင့်စိတ်ကို သက်ရောက်ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်၊ သကြားပါတဲ့အစာနှင့် fast food တွေကို ရှောင်ပါ။ သစ်သီးတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို စားပါ။ သူတို့က အစာစားတာအတွက်လည်း ကောင်းသလို သရေစာအတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။ အဆီနည်းအသားကိုစားပါ။ သံလွင်ဆီ၊ ထောပတ်သီးကဲ့သို့သော ကောင်းတဲ့အဆီတွေကို စားပါ ။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အချို့ စားနိုင်ပါတယ်။ အဖြူရောင်ပေါင်မုန့်အစား ဂျုံပေါင်မုန့်ကို မှီဝဲပါ။
၇။ ကိုယ့်အတွက် ငွေနည်းနည်းသုံးပါ
အိမ်အတွက် ၊ ခင်ပွန်းအတွက်၊ သားသမီးအတွက် သင်ဝယ်တယ်။ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် နောက်ဆုံးဝယ်ခဲ့တာ ဘယ်အချိန်တုန်းကလဲ? ကိုယ်ဝယ်ချင်တာရှိရင် ကိုယ့်အတွက်လည်း ဝယ်ပါ။ အမြဲတမ်း ချွေတာနေဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး၊ သင့်လက်တွဲဖော်နဲ့အတူ self-care plan ချပါ။ ဒီအကြံပြုချက်တွေထဲက တစ်ခုနဲ့သာ စတင်ကြည့်ပါ။ သင်ပိုပျော်ရွှင်တယ်လို့ ခံစားရပြီး သင့်ရဲ့ relationshipမှာ ကူးစက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပျော်စရာက စာရင်းရဲ့ ဟိုးအောက်ခြေမှာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ပထမဆုံးနေရာမှာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။